कपाल झरेर दोधारमा हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस् यी ९ समस्याले ग्रसित भएमा झर्ने गर्छ कपाल – Online Nepalaja
बढी मात्रामा जंकफुडमा निर्भर हुँदा शरिमा विभिन्न पोषणको कमी हुन जान्छ । जुन कपाल लट्टा पर्ने प्रमुख मध्येको एउटा कारण हो । त्यस्तै, खानपानमा र शरिरको पोषणको वारेमा राम्रोसँग ख्याल नपुर्‍याउँदा बढी मात्रामा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ ।हर्मोनको परिवर्तन
Prevगायिका आस्था राउत विवहा गर्ने तयारी , को हुन हुनेवाला बेहुला ?
Nextसुस्मिताको कोठामा यस्तो भेटियो, आमाको मोबाईलबाट खिचेको भिडियो, रुँदै हेरिन् छोरीको सामान (हेर्नुहोस भिडियो)
बुढी हुदैनन् की क्या करिश्मा ! हेर्नुहोस् लोभलाग्दा तस्बिरहरु